Myanmar Small Businesses Development: August 2013
စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ လိုအပ်ချက်များကို ဆန်းစစ်ခြင်း (Are Entrepreneurs Born or Bred?)
ပြီးခဲ့သည့် ဆောင်းပါးတွေမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတရပ်ကိုုစတင်ဖို့လိုအပ်ချက်တွေ၊ လုပ်ငန်းစတင်ဖို့ပြင်ဆင်ရမယ့် အချက်တွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းရေးဆွဲရာမှာ လိုအပ်ချက်တွေကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တခုကတော့ မိမိမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုကိုစတင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်း၊ ကြံအင်လက္ခဏာတွေ ရှိမရှိဆိုတာကိုဆန်းစစ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆန်းစစ်နိုင်ဖို့အတွက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဒါဟမ်တက္ကသိုလ် (Durham University)က စွန့်ဦးတီထွင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကို လေ့လာပြီး မေးခွန်းလွာ တခုပြုစုထားပါတယ်။ ဒါဟမ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ သုတေသနပြုချက်အရ စွန့်ဦးတီထွင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ အောက်ဖေါ်ပြပါ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ ပိုင်ဆိုင်လေ့ ရှိပါတယ်။
လုပ်ငန်းပြီးမြောက်အောင်မြင်လိုခြင်း (Need for Achievement)
အမှီအခိုကင်းပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆောင်ရွက်လိုခြင်း (Need for Autonomy)
တီထွင် ဖန်တည်းလိုခြင်း (Crerative tendency)
စွန့်စားလိုခြင်း (Risk Taking)
ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာပြတ်သားခြင်း (Drive and Determination)
မိမိမှာ အထက်ပါ အရည်အချင်းတွေရှိမရှိ ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့၊ မိမိကိုယ်မိမိ နားလည်နိုင်ဖို့ ဒါဟမ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လုပ်ငန်းရှင်အရည်အသွေး ဆန်းစစ်ချက်မေးခွန်းလွှာကို မြန်မာလို သင့်လျှော်အောင် ပြန်ဆိုပေးထားပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းလွှာမှာ မေးခွန်း ၅၄ ခုပါရှိပြီး စာဖတ်သူအနေနဲ့ မေးခွန်းပါ အဆိုကို သဘောတူ မတူဘဲ ဖြေဆိုရမှာပါ။ မိမိရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို တိတိကျကျ ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ အတွက် မေးခွန်းတွေကို မိမိ စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်း မှန်မှန်နဲ့ မြန်မြန် ဖြေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ ဆန်းစစ်ချက်တခု ရဖို့အတွက် စာဖတ်သူရဲ့ အဖြေက တိကျဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဖြေဆိုရမယ့်ပုံစံကတော့ စာရွက်လွတ်တခုပေါ်မှာ မေးခွန်းနံပါတ်နဲ့ ၎င်းမေးခွန်းကို စာဖတ်သူ သဘောတူ၊ မတူ ရေးမှတ်ထားပါ။ မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေဆိုပြီးတဲ့အခါမှာ စာဖတ်သူမှာ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် တယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရှိ၊ မရှိ၊ မရှိသေးရင်လည်း မိမိမှာ ဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိတယ်၊ ဘယ်အချက်တွေကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ မိမိကို မိမိ ဆန်းစစ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း (၁)။ စိန်ခေါ်မှုကင်းမဲ့ပြီး ပျင်းစရာကောင်းသော သော်လည်း လစာကောင်းသော အလုပ်ဖြစ်ပါက လုပ်နိုင်သည်။
မေးခွန်း (၂)။ မိမိအလုပ်အတွက် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးရမည့် ဦးတည်ချက်များ မိမိကိုယ်တိုင် ချမှတ်ရာတွင် လွယ်ကူသည့် ဦးတည်ချက်များထက် ခက်ခဲသည့် ဦးတည်ချက်များကို ရွေးချယ်ချမှတ်သည်။
မေးခွန်း (၃)။ သမရိုးကျမဟုတ်ဘဲ ထူးခြားသောအလုပ်များကို မလုပ်ကိုင်လိုပါ။
မေးခွန်း (၄)။ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောသူများ အောင်မြင်မှုမရရှိခြင်းမှာ ပေါ်ပေါက်လာသော အခွင့်အလမ်းများကို အသုံးမချနိုုင်သောကြာင့် ဖြစ်သည်။
မေးခွန်း (၅)။ မိမိသည် စိတ်ကူးယဉ်လေ့သိပ်မရှိသူဖြစ်သည်။
မေးခွန်း (၆)။ အကယ်၍ အခြားသူတဦးက မိမိတင်ပြသည်ကို လက်မခံပါက မိမိ အမြင်ကို ခုခံကာကွယ် လေ့ရှိသည်။
မေးခွန်း (၇)။ ဘယ်လောက် ကြိုးစားကြိုးစား အထုံဗီဇမပါက အောင်မြင်မည်မဟုတ်။
မေးခွန်း (၈)။ မိမိ၏ စိတ်ကူးအကြံဥာဏ်များသည် သမရိုးကျမဟုတ်ဟု လူများက တခါတရံ မြင်လေ့ရှိသည်။
မေးခွန်း (၉)။ မိမိပိုင်ငွေ ၅၀၀ ကျပ်ကိုရင်း၍ ကံစမ်းလောင်းကစားရမည်ဆိုပါက ငွေအနည်းငယ်သာ ရရှိနိုင်သည့် ဖဲကစားခြင်းထက် ဆုကြေးငွေများများရမည့် ထီလက်မှတ်ကို ဝယ်မည်။
မေးခွန်း (၁၀)။ မိမိအတွက် လွယ်ကူသော အလုပ်မျိုးထက် မိမိစွမ်းဆောင်ရည်ကို အစွမ်းကုန် အသုံးပြုရသည့် စိန်ခေါ်မှုမျိုးကို နှစ်သက်သည်။
မေးခွန်း (၁၁)။ မိမိ၏ စွမ်းဆောင်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ဝင်ငွေအလွန်ကောင်းနိုင်သော အလုပ်မျိုးထက် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်နှင့် တည်ငြိမ်သည့် အလုပ်မျိုးကို ပိုသဘောကျသည်။
မေးခွန်း (၁၂)။ အလုပ်တခုလုပ်ရာတွင် တခြားသူများ၏ ထင်မြင်ချက်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ မိမိ သဘောအတိုင်း လုပ်လေ့ရှိသည်။
မေးခွန်း (၁၃)။ လူအများ ကြုံတွေ့ ရသည့် အခက်အခဲအများစုသည် ကံမကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မေးခွန်း (၁၄)။ အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဆိုရင်တောင် မိမိသိလိုသည့်ကိစ္စတခု၏ အရင်းအမြစ်ကို ရေဆုံးရေဖျား စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်လိုသည်။
မေးခွန်း (၁၅)။ အလုပ်တခုလုပ်ရာတွင် ပြဿနာများကြုံတွေ့ရပါက ထိုအလုပ်ကိုပစ်ပြီး အခြားအလုပ်ကို ပြောင်းလုပ်သည်။
မေးခွန်း (၁၆)။ တခုခုကို လုပ်ကိုင်ရန် စီမံကိန်းချပြီးပါက ထိုအလုပ်ကို အမြဲတမ်းလိုလို ပြီးစီးအောင် လုပ်ဖြစ်သည်။
မေးခွန်း (၁၇)။ မိမိဘဝတွင် မျှော်လင့်မထားသော ရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲများကို မလိုလားပါ။
မေးခွန်း (၁၈)။ အောင်မြင်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းက ၅၀/၅၀ ဆိုပါက စွန့်စားမည်။
မေးခွန်း (၁၉)။ လာမည့်အနာဂါတ်ထက် လက်ရှိကာလနှင့် အတိတ်အကြောင်းကိုပိုပြီး စဉ်းစားတွေးတောလေ့ရှိသည်။
မေးခွန်း (၂၀)။ မိမိတွင် ပိုက်ဆံရနိုင်မည့် အကြံဥာဏ်ကောင်းများရှိပါက ငွေချေးပြီး လုပ်ကိုင်ရန် ဝန်မလေးပါ။
မေးခွန်း (၂၁)။ မိမိပါဝင်သည့် အသင်းအဖွဲ့တခုတွင် တခြားသူတယောက်ကို ဦးဆောင်စေရန် တာဝန်ပေးမှုကို ကျေနပ်သည်။
မေးခွန်း (၂၂)။ ယေဘူယျခြုံကြည့်ပါက လူများအနေဖြင့် သူတို့နှင့် ထိုက်တန်သည်ကိုသာ ရရှိသည်။
မေးခွန်း (၂၃)။ မိမိသေချာစွာမသိသည့် အကြောင်းချင်းရာတခုအား ခန့်မှန်းရခြင်းကို မနှစ်သက်ပါ။
မေးခွန်း (၂၄)။ အလုပ်တခုလုပ်ရာတွင် လူအများကျေနပ်မှုရအောင် ကြိုးစားခြင်းထက် အဆိုပါအလုပ်ကို ကောင်းကောင်းလုပ်ရန် ပိုအရေးကြီးသည်။
မေးခွန်း (၂၅)။ မိမိအပေါ် သြဇာရှိသူများကျေနပ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါက ဘဝမှာ မိမိလိုအပ်သော အရာများကို ရရှိလိမ့်မည်။
မေးခွန်း (၂၆)။ အခြားသူများက မိမိကို အမေးအမြန်းထူသူတယောက်ဟု ထင်ကြသည်။
မေးခွန်း (၂၇)။ ဆုံးရှုံးဖို့ အလားအလာရှိသည့်အလုပ်တခုကို မလုပ်လိုပါ။
မေးခွန်း (၂၈)။ အခြားသူများ အချိန်ကို မလေးစားပါက စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရသည်။
မေးခွန်း (၂၉)။ ဆုံးဖြတ်ချက်တခု မချခင်မှာ လိုအပ်သော အချက်အလက်တွေကို အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ ရအောင်စုဆောင်းသည်။
မေးခွန်း (၃၀)။ အလုပ်တခုကို လုပ်ဆောင်ရာမှာ သူတပါးအကူအညီမလို (သို့မဟုတ်) မလိုချင်ပါ။
မေးခွန်း (၃၁)။ အခြေအနေ အချိန်အခါ မပေးပါက အောင်မြင်မှု ရရှိမည်မဟုတ်။
မေးခွန်း (၃၂)။ ပညာရပ်တခုခုကို တဖက်ကမ်းခတ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် တတ်မြောက်ခြင်းထက် ပညာရပ်တော်တော်များများ အတော်အသင့်တတ်မြောက်လိုသည်။
မေးခွန်း (၃၃)။ အလုပ်ကျွမ်းကျင်သော်လည်း မိမိသဘောမကျသူနဲ့ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရခြင်းထက် မိမိသဘောကျပြီး အလုပ်သိပ်မကျွမ်းကျင်သောသူ တယောက်နှင့် အတူလုပ်ကိုင်လိုသည်။
မေးခွန်း (၃၄)။ အောင်မြင်မှုသည် အလုပ်ကြိုးစားမှု၏ ရလာဒ်ဖြစ်သည်။ ကံတရားနှင့်မဆိုင်။
မေးခွန်း (၃၅)။ အလုပ်လုပ်ရာတွင် နည်းလမ်းအသစ်များ စမ်းသပ်အသုံးပြုခြင်းထက် သမရိုးကျ လုပ်နေကြအတိုင်းသာ လုပ်လိုသည်။
မေးခွန်း (၃၆)။ အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကို မချခင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်များကို အချိန်အကြာကြီး စဉ်းစားမနေဘဲ မြန်မြန်ထက်ထက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချလေ့ရှိသည်။
မေးခွန်း (၃၇)။ အလုပ်တခုကို လုပ်ရာ၌ ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ခြင်းထက် အခြားသူများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး အဖွဲ့ဝင်တဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက်လိုသည်။
မေးခွန်း (၃၈)။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလာဒ်များထွက်ပေါ်လာအောင် လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းတခုထက် သေချာပေါက်ပျော်ရွင်မှုပေးမည့် အတွေ့အကြုံတခုကို ပိုလိုလားသည်။
မေးခွန်း (၃၉)။ အလုပ်တခုကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပြီး သူများမျှော်လင့်သည့်အတိုင်း လုပ်ကိုင်သည်။
မေးခွန်း (၄၀)။ မိမိအတွက်တော့ လိုလားတောင့်တသောအရာများရရှိခြင်းသည် ကံတရားနှင့်မဆိုင်။
မေးခွန်း (၄၁)။ မိမိ ဘဝတွင် အရာအားလုံးကြိုတင်စီမံထားသည့်အတိုင်း ချောချောမွေ့မွေ့နှင့် စံနစ်တကျရှိလိုသည်။
မေးခွန်း (၄၂)။ အလုပ်တခုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲအတားအဆီးများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပါက ဆုံးရှုံးမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများထက် အောင်မြင်မှု၏ အသီးအပွင့်များကို ပိုစဉ်းစားသည်။
မေးခွန်း (၄၃)။ မိမိဘဝတွင် တွေ့ကြုံခံစားဖြစ်ပျက်သမျှကို အခြားသူများက ဆုံးဖြတ်သည်ဟု ယုံကြည်သည်။
မေးခွန်း (၄၄)။ တချိန်ထဲမှာ အလုပ်အများကြီးကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
မေးခွန်း (၄၅)။ အခြားသူများထံမှ အကူအညီတောင်းခံရန် ဝန်လေးသည်။
မေးခွန်း (၄၆)။ အရေးကြီးသော အလုပ်ကိစ္စများ ပြီးမြောက်ရန်အတွက် အအိပ်ပျက်၊ အစားပျက်ခံပြီး လုပ်ကိုင်လေ့ရှိသည်။
မေးခွန်း (၄၇)။ လက်ရှိ လုပ်ကိုင် ကြုံတွေ့နေရသည့် ပါတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ် အကျွမ်းတဝင် မရှိသည့် ပါတ်ဝန်းကျင်ထက် ပို၍ကောင်းသည်။
မေးခွန်း (၄၈)။ လူအတော်များများက မိမိကို ခေါင်းမာသူတယောက်ဟု မြင်ကြသည်။
မေးခွန်း (၄၉)။ လူများဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရခြင်းမှာ သူတို့၏အဆုံးအဖြတ် မှားယွင်းခြင်း၏ ရလဒ်ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ပြောရန်ခဲယဉ်းသည်။
မေးခွန်း (၅၀)။ တခါတရံ မိမိတွင် စိတ်ကူးအကြံဥာဏ် အများအပြားရှိသည့်အတွက် မည့်သည့်အကြံအား ရွေးချယ်အကောင်အထည်ဖေါ်ရမည်ကို မသိပါ။
မေးခွန်း (၅၁)။ အလုပ်ပိတ်ရက် နားရက်များတွင် စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ အနားယူနိုင်သည်။
မေးခွန်း (၅၂)။ မိမိအနေဖြင့် အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ ပြီးမြောက်အောင်လုပ်သောကြောင့် ဘဝမှာ လိုအပ်သောအရာများကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မေးခွန်း (၅၃)။ အစဉ်အလာအတိုင်း နေထိုင်လုပ်ကိုင်ရခြင်းထက် အပြောင်းအလဲနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိအောင် ပြောင်းလဲရခြင်းက မိမိအတွက် ပိုခက်ခဲသည်။
မေးခွန်း (၅၄)။ စွန့်စားရမှု ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း မိမိအနေဖြင့် လုပ်ငန်းအသစ်များကို စတင်ရခြင်းကို သဘောကျသည်။
အထက်ပါ မေးခွန်းတွေကို သဘောတူ၊ မတူ ဖြေဆိုုပြီးတဲ့အခါမှာ စာဖတ်သူမှာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တခုကို စွန့်စားထူထောင်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိ၊ မရှိ ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီအရည်အချင်းအတွက် အောက်ပါ မေးခွန်းများကို သဘောတူ၊ မတူ ဖြေဆိုထားတဲ့ အဖြေကိုကြည့်ပြီး အဖြေမှန်ပါက (၁)မှတ်၊ မမှန်ပါက (၀)မှတ်ပေးပါ။
မေးခွန်း (၁) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၆) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၁၀) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၁၅) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၁၉) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၂၄)သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၂၈) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၃၃) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၃၇) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၄၂) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၄၆) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၅၁) သဘောမတူပါ။
အမှတ်ပေးပြီးတဲ့အခါ ဒီအရည်အချင်းအတွက်ရမှတ်တွေကို ပေါင်းကြည့်ပါ။ အမြင့်ဆုံး ရနိုင်တဲ့အမှတ်က (၁၂)မှတ်ဖြစ်ပြီး စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ ပျမ်းမျှအမှတ်ကတော့ (၉)မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ ရမှတ်က (၉)မှတ်နဲ့ အထက်မှာရှိတယ်ဆိုရင် သင်မှာ အောက်ဖေါ်ပြပါ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ အားလုံးမဟုတ်တောင်မှ အများစု ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ရှေ့ရေးကို မျှော်မြင်တတ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးခြင်း၊ အကောင်းမြင်တတ်ခြင်း၊ အလုပ်ကို ဦးစားပေးခြင်း၊ ရလဒ်ကို ဦးစားပေးခြင်း၊ လုံ့လဝီရိယ ထက်သန်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြတ်သားခြင်း၊ လုပ်ငန်းကို စူးစူးစိုက်စိုက်လုပ်ကိုင်ခြင်း။
အရည်အချင်း (၂)။ အမှီအခိုကင်းပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆောင်ရွက်လိုခြင်း
မေးခွန်း (၃) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၁၂) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၂၁) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၃၀) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၃၉) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၄၈)သဘောတူသည်။
ဒီအရည်အချင်းအတွက် အမြင့်ဆုံး ရနိုင်တဲ့အမှတ်က (၆)မှတ်ဖြစ်ပြီး စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ ပျမ်းမျှအမှတ်ကတော့ (၄)မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ ရမှတ်က (၄)မှတ်နဲ့ အထက်မှာ ရှိတယ်ဆိုရင် သင်မှာ အောက်ဖေါ်ပြပါ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ အားလုံးမဟုတ်တောင်မှ အများစု ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
သမရိုးကျမဟုတ်သောအလုပ်မျိုးကိုလုပ်ကိုင်လိုခြင်း၊ တစ်ဦးတည်းလုပ်ကိုင်လိုခြင်း၊ မိမိ စိတ်ကြိုက်လုပ်ကိုင်လိုခြင်း၊ မိမိတွေးထင်ချက်အတိုင်း ပြောဆိုပြုမူခြင်း၊ အမိန့်အတိုင်း လိုက်နာရခြင်းကို မနှစ်သက်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ လူအများလုပ်တိုင်း လိုက်မလုပ်ခြင်း၊ ခေါင်းမာပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာခြင်း။
အရည်အချင်း (၃)။ တီထွင် ဖန်တည်းလိုခြင်း
မေးခွန်း (၅) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၈) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၁၄) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၁၇) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၂၃) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၂၆)သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၃၂) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၃၅) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၄၁) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၄၄) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၅၀) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၅၃) သဘောမတူပါ။
ဒီအရည်အချင်းအတွက် အမြင့်ဆုံး ရနိုင်တဲ့အမှတ်က (၁၂)မှတ်ဖြစ်ပြီး စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် တယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ ပျမ်းမျှအမှတ်ကတော့ (၈)မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ ရမှတ်က (၈)မှတ်နဲ့ အထက်မှာ ရှိတယ်ဆိုရင် သင်မှာ အောက်ဖေါ်ပြပါ ကိုယ်ရည်ကိုုယ်သွေးတွေ အားလုံးမဟုတ်တောင်မှ အများစု ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းပြီး ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း၊ စိတ်ကူးတွင် မွေ့လျှော်တတ်ခြင်း၊ စွယ်စုံရပြီး သိလိုစိတ်ပြင်းပြခြင်း၊ အကြံအစည်များခြင်း၊ ထိုးထွင်း မျှော်မြင်တတ်ခြင်း၊ စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို မွေ့လျှော်ခြင်း အသစ်အဆန်း အပြောင်းအလဲကို သဘောကျခြင်း။
အရည်အချင်း (၄)။တွက်ချက်ပြီး စွန့်စားလိုခြင်း
မေးခွန်း (၂) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၉ ) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၁၁) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၁၈)သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၂၀) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၂၇) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၂၉ ) သဘောမတူပါ။ မးခွန်း (၃၆)သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၃၈) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၄၅) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၄၇) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၅၄) သဘောတူသည်။
ဒီအရည်အချင်းအတွက် အမြင့်ဆုံး ရနိုင်တဲ့အမှတ်က (၁၂)မှတ်ဖြစ်ပြီး စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် တယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ ပျမ်းမျှအမှတ်ကတော့ (၈)မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ ရမှတ်က (၈)မှတ်နဲ့ အထက်မှာ ရှိတယ်ဆိုရင် သင်မှာ အောက်ဖေါ်ပြပါ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ အားလုံးမဟုတ်တောင်မှ အများစု ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
မပြည့်စုံသော သတင်းအချက်အလက်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်လေ့ရှိခြင်း၊ မိမိ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုတိကျစွာ အကဲဖြတ်လေ့ရှိခြင်း၊ မိမိစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လျှော်ညီသော ရည်မှန်းချက်ကို ချမှတ်လေ့ရှိခြင်း၊ ရရှိလာနိုင်မည့် အကျိုး အပြစ်များကိုတွက်ချက် သုံးသပ်လေ့ရှိခြင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများသော်လည်း ရရှိနိုင်သည့် ဦးတည်ချက်များကို ချမှတ်လေ့ရှိခြင်း။
အရည်အချင်း (၅)။ ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်မာပြတ်သားခြင်း
မေးခွန်း (၄) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၇) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၁၃) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၁၆)သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၂၂) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၂၅) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၃၁) သဘောမတူပါ။ မးခွန်း (၃၄)သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၄၀) သဘောတူသည်။ မေးခွန်း (၄၃) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၄၉) သဘောမတူပါ။ မေးခွန်း (၅၂) သဘောတူသည်။
ပေးလာသည့်အခွင့်အရေးကို ရယူနိုင်ခြင်း၊ ကံကြမ္မာကို ရိုးမယ်ဖွဲ့လေ့မရှိခြင်း၊ မိမိကံကို မိမိဖန်တည်းလေ့ရှိခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ခြင်း၊ ကိုယ်သာလျှင် ကိုယ့်ဘဝ၏ ပဲ့ကိုင်ရှင်ဟု ယုံကြည်ခြင်း၊ ရလဒ်နှင့် ညီမျှသော အားထုတ်မှုရှိခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ပြတ်သားခြင်း။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဒီရလဒ်တွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်မှာ ဘယ်အရည်အချင်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံတယ်၊ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုသေးတယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
တကယ်လို့ မူရင်း ဒါဟမ်တက္ကသိုလ်က မေးခွန်းလွှာကို ဖြေဆိုလိုတယ်ဆိုရင် အောက်ဖေါ်ပြပါ အင်တာနက်လင့်ကို သွားရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။
Burns, Paul (2010) Entrepreneurship and Small Business (3rd edition) Palgrave Macmillan: Basingstoke
General Entrepreise Tendency Test © Durham University 2003
Image Credit:http://smallbiztechnology.com/wp-content/uploads/2012/06/Inspired-Entrepreneurship2.jpg (under creative commons licence)
စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ လိုအပ်ချက်များကို ဆန်းစစ်ခြင်း by မြင့်မိုးချစ် is licensed underaCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Posted by Myint Moe Chit at 8/03/2013 08:43:00 pm No comments:
Labels: SME ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်လာဖိ...